KHUDAARTA PEAR ZHEGALOV: SHARAXAADDA KALA DUWAN, TALADA UGU FIICAN EE DARYEELKA IYO BEERITAANKA - KU'SAABSAN
Kiimiko - aad u dhadhan fiican leh, iyo sidoo kale miro aad u caafimaad leh. Laga soo bilaabo tufaax tufaax ah oo caan ka badan waxay kala saaraa dhadhan macaan iyo caraf udgoon. Badanaa jardiinooyinka iyo agagaarka magaalooyinka ku yaala waxaa jira geedo tufaax ah oo ka badan geedaha pear.
Waxaa laga yaabaa in tani ay sabab u tahay noocyo kala duwan oo kala duwan oo kala duwan ee pear. Sida caadiga ah, dhammaan noocyada noocaas ah waa wax yar oo isku mid ah. Laakiin gaar ahaan iyaga ka mid ah, pear ee Xasuusta of Zhegalov kala duwan yihiin.
Khudaarta Pear Zhegalov - noocyo badan oo dayrta xilliga dayrta, waxay leeyihiin ujeedo guud. Aan eegno dhammaan sifooyinka fasalkaan.
Ma taqaanaa? Kala duwan ayaa loo magacaabay sharaf ka mid ah hiddaha qibrada leh ee Sergei Ivanovich Zhegalov, oo abuuray koowaad ee waaxda takhasuska ee USSR ee taranta.
Taariikhda noocyada kala duwan ee pear breeding Memory Jegalov
Kalluumeysatadii hore ee Soofiyeeti waxay leeyihiin sabab weyn oo loogu talagalay kibirka.
Natiijooyinka shaqadooda adag ayaa lagu arki karaa tiro badan oo kala duwan oo isteroberi ah iyo dhir kale, kuwaas oo leh guul weyn oo ku baahsan dhulalka beerta.
Mid ka mid ah waxyaabaha soo saarka beeraha ayaa ah kala duwanaanta pear ee xasuusta of Zhegalov, kaas oo la badeeco by breeder caan - Sergey Tikhonovich Chizhov.
Sannadkii 1980-aad, S. T. Chizhov wuxuu qabtay shaqo ku saabsan is-dhexgelinta kala duwan ee noocyada kala duwan sida Olga iyo Lesnaya Beauty. Iyadoo ay sabab u tahay xulashada, xusuusta kala duwan ee of Zhegalov la nadiifiyey. Sannadihii 90-aad, noocyada kala duwan ayaa maray dhammaan tijaabooyinka gobolka waxaana loo oggolaaday isticmaalka warshadaha.
Noocyo kala duwan oo isdabajooga ah ee Memory Jegalov
Noocyo kala duwan oo lagu magacaabo Memory Zhegalov waa inay billowdaan iyagoo taxaya astaamaha ugu muhiimsan. Sababtoo ah waa lagama maarmaan in la dego on sharaxaad ka mid ah geedka laftiisa iyo midhihiisa - isteroberi iyo casaan leh.
Ma taqaanaa? Kala duwanaanshaha xusuusta Zhegalov waxay u adkaysatay cudurada ugu muhiimsan ee geedaha midhaha leh ee dabeecada fangaska, sida qolof.
Geedaha kala duwan ee noocaan ah waxaa lagu gartaa heerka koritaanka degdegga ah.. Badanaa geedaha waa dherer dhexdhexaad ah, laakiin waxay kaloo dheeraan karaan. Taajka geedka wuxuu ka mid yahay nooca faafa, halkii aad dhif u ah, laakiin waxaa lagu gartaa caleenta wanaagsan. Jilifka geedku waa midab ama madow. Kala duwan ayaa leh wax soo saar sare, tusaale ahaan, ku dhowaad 40 kiilo oo isteroberi ah ayaa laga soo qaadi karaa geed keliya. Caadi ahaan dhererka geedkii pear ee xasuusta Jegalladu waa 3 mitir. Xilliga Boosku wuxuu bilaabmaa qeybta labaad ee Sebtembar, haddii cimiladu aad u badan tahay, oo leh tiro yar oo cadceedsan ah, ka dibna dillaacu wuxuu ku jiri karaa oo bilaabi karaa horraanta Oktoobar. Isterobar ayaa si fiican loo ilaaliyaa laanta. Farqiga u dhexeeya xasuusta Jegal - Tani waa suuq geyn iyo gaadiid aad u wanaagsan.
Miraha heerarka celceliska cabbirka cabbirka celceliska. Sida caadiga ah, miisaanka midhaha waa 125-145 g, mararka qaarkood isteroberi ayaa gaari kara miisaanka 210 g iyo xitaa in ka badan. Kiimikadu waxay leedahay qaab biconomic ah ama midabsami ah, daboolay dhuuban, siman, dhalaalaya, cufan dhexdhexaad ah iyo maqaar yar oo dufan leh. Midabka pear wuxuu leeyahay cagaar ama midab huruud ah oo leh buluug, qaloocsanaan ah oo ah midab guduudan. Seeds of size dhexdhexaad ah oo leh brown madow, midabka hodanka ah.
Jidhka miskaha waxaa lagu kala saaraa midab cad ama midab huruud ah. Isterobar waxaa lagu gartaa heerar sare oo saliid iyo niyadjab. Saxarka miro ayaa la jilicsan yahay, wuxuu leeyahay qiyaas dhexdhexaad ah. Xusuusta miraha miraha Zhegalova waxay leedahay dhadhan macaan iyo dhadhan macaan.
Qodobka ugu weyn ee xusuusta ee Jegalal waa Tani waa riwaayad. Sababtoo ah ka taxadarashada goosashada ugu horeysay ee isteroberi waxaa laga heli karaa 3-4 sano ka dib markii laga beerto geedka. Marka la barbardhigo: noocyada sida Moscow Bergamot iyo Dobryanka waxay keenaan miraha ugu horreeya 4-5 sano, iyo noocyada xusuusta bisha Febraayo iyo weliba in ka badan - 5-6 sano.
Faa'iidada kale ee xusuusta pear Zhegalov waa gaadiidka wanaagsan iyo nolol shelf.
Nolosha kaydinta ee kala duwan ee xusuusta Zhegalov waa 100-120 maalmood, kaas oo aad ku faraxsan tahay inaad ku raaxaysato kareemka iyo karootada cusub ee saxda ah illaa bilawgii bisha Febraayo. Sidoo kale, kala duwan waxaa lagu gartaa roobab liidata ee miraha, taas oo kuu ogolaaneysa inaad badbaadiso badi goosashada ee isteroberi.
Faa'iidada shakiga ah ee Xusuusta ee kala duwan ee Zhegalov waa adag yahay jiilaalka aad u fiican, taas oo ay ku xiran yihiin iska caabin ah xaaladaha cimilada xun.
Dhibcaha kala duwan, waxaa suurtogal ah in ay hal mar soo saaraan pollen of pear xasuusta ee xasuusta Zhegalov. Naxariistaan ​​kala duwanaanshahan waa waa is-qaadsiin la'aan (awood la'aanta is-pollination, baahida loo qabo nooc kale ee pollinator). Sidaa darteed, waxaa lagama maarmaan ah in la doorto pollinator leh daryeel gaar ah, noocyada noocan ah sida Pet Yakovleva iyo Moscow Bergamot ayaa loo tixgeliyaa kuwa ugu wanaagsan.
Ma taqaanaa? Xaaladaha xaaladaha cimiladu waxay sahlaysaa bixinta baaxada ee beeska iyo pollinators kale oo ah pollination ugu fiican.
Noocyada abuuritaanka geedo pear of Memory of Zhegalov
Marka aad iibsanaysid geedo, xusuuso kuwan soo socda:
farabadan kasta oo geedo ah waa in lagu calaamadeeyaa calaamadda leh magaca noocyada kala duwan;
jilbiska seeding waa in aan la qarxin. Way fiicantahay haddii ay tahay mid sahlan in la taabto, iyada oo aan lahayn dildilaacyo ama waxyeello farsamo;
nidaamka xididka waa in si fiican loo horumariyo (3-5 xididood oo leh dherer ah ugu yaraan 25 sentimitir);
qoyaanka iftiinka ee xididada waa la ogol yahay. Xididdada qaabdhigsan ee qaabaysan ayaa jebin kara xitaa xooga adag. Samee cutub yar, waxaadna arki doontaa dhar cad cad;
haddii geedo leeyihiin nidaam xidid furan, ka dibna waa inay ahaataa iyada oo aan caleemo, iyo guga, oo leh burooyinkeeda aan la furin.
Ka dib markii ay soo iibsadaan geedo ku habboon, sii wadaan doorashada meel iyo go'aaminta wakhtiga beerto.
Waa maxay waqtiga ugu wanaagsan ee lagu beeri karo geedo? Sidaa darteed, geedo leh nidaam xidid furan, beeritaanka waxaa la fuliyaa xilliga gu'ga (laga bilaabo dhammaadka Abriil - ilaa bilowga Maajo), iyo sidoo kale dayrta (laga bilaabo dhammaadka Sebtembar - ilaa dhammaadka October).
Xilliga dayrta, tayada wax soo saarka waa mid aad u wanaagsan, iyo pear beerto in xasuusta jeg ah ee dayrta ee dayrta abuuraa xaalado wanaagsan ee ku noolaanshaha geedo iyo dib-u-cusboonaynta ee xididdada. Laakiin waqti isku mid ah, xaaladaha jiilaalka ee aan fiicnayn waxay waxyeelleyn karaan oo ay wiiqi karaan geedo.
Beeridda guga, oo ay weheliso waraabinta joogtada ah waxay keenaysaa badbaadin wanaagsan oo geedo ah.
Marka aad dooranayso goobta beeritaanka, xusuuso in pear of Memory of Zhegalov u baahan yahay in si fiican u iftiin iyo ilaaliyo dabaysha. Dhaqan ahaan nooc kasta oo carrada ah ayaa ku habboon noocyada kala duwan, marka laga reebo bac, qoyan iyo walax macaan oo sarreeya. Gaar ahaan si fiican ayaa u kordhay noocyada kala duwan ee loo yaqaan 'chernozems' oo leh falcelin dhexdhexaad ah iyo xayawaanka lafdhabarta.
EHaddii xayawaanka acidic ay ku badan yihiin goobta, ka dibna waxaa lagama maarmaan ah in la hormariyo. Sidoo kale xasuuso ku saabsan aan la aqbalin isticmaalka bacriminta nafaqada ah.
Ka hor inta aadan bilaabin beeritaanka, waxaa lagama maarmaan ah in la sameeyo qashin qoto dheer oo qoto dheer ee ciidda. Ka dib marka la qodo, 6-8 kiiloogaraam oo compost ah ayaa la soo saaray. Waxa kale oo ay la socotaa superphosphate ee qiyaasta 40-60 grams halkii mitir iyo saliidda cusbada ee qiyaasta 20-30 garaam, siday u kala horreeyaan. Xuddun Pear Zhegalova u baahan yahay taxadar iyo daryeel.
Ka hor inta beerto geedo of xasuusta Zhegalov, waxaa lagama maarmaan ah in la qodo daloolka ah kaas oo ah wax yar ka weyn mugga guud ee nidaamka xidid seedling. Ciidda ku jirta illaa 3 mitir waa inay ahaato mid dabacsan si ay u siiso dhirta iyada oo la badalayo hawada.
Waxay qaadataa ugu yaraan hal wiig ah si loogu diyaariyo ceelka si loo beerto geedka. Muddadan, carrada waxaa ku filan in la dhigo, taas oo ka caawisa ka hortagga xididdada ka goosta inta lagu guda jiro beeritaanka iyo ka dib.
Qorshaha geedo beerto
Qaababka beerto waxay si toos ah ugu tiirsan yihiin xoogga kala duwan. Sidaa darteed, noocyo xoog leh oo soo kordhaya on stock a stock waxaa la dhigaa sida ay qorshaha: 6-7 x 4-5 mitir, dherer dhexdhexaad ah - 4-5 x 3-4 mitir. Haddii pear lagu kariyey on quince ah, marka masaafada u dhaxaysa saf ah la dhimi karaa ilaa 3-4 mitir, iyo safka - ilaa 1.5-2 meter.
Beeridda geedo udambeeyey waxay dhacdaa sida farsamooyinka soo socda:
oo qaybta dhexe ee caleenta cawsduurna dusheeda lagu soo gelin doono, kaasoo ah geed ceedhiin ah oo aan weligeed adkaysnayn;
inta lagu guda jiro beeritaanka, dhig seedling pear ah sida habka qoorta xididka geedka kor u kaco heerka ciidda qiyaastii 5-6 sentimitir;
ka dib markii xididdada waxaa lagu daboolay ciidda, geedka waa in la waraabiyo si aad u badan. Haddii aad beeray dhowr geedo, ka dibna waraabinta waxay u baahan doontaa 3 baaldiyo oo biyo ah geedka kasta. Sii shaati maalmaha ugu horreeya ka dib markii laga beerto, iyo sidoo kale mulch dhulka ku yaal goobada prestvolnom. Sida mulch ku habboon organics kala duwan - peat ama sida balka. Tani waxay hagaajin doontaa badbaadinta waxayna yareyneysaa muddada qalabka warshadaynta meel cusub.
Waa muhiim! Haddii ka dib markii la beerto qoorta xididka ma ahan masaafada 5-6 sentimitir oo kor ku xusan heerka dhulka, waxaa lagu talinayaa in dib loo dhigo.
Noocyada kala duwan ee kala duwan ee daryeelka caruusadda Memory Zhegalov
Si pear si ay u koraan oo u horumariyaan si sax ah, waxaa lagama maarmaan ah in ay qaataan xannaano sax ah. Xasuuso in seedling waa in ay ahaato mid fiican (laakiin aan aad u xooganeyn) oo loo xirxiray jeexjeex. Wareegga Pristvolny wuxuu u baahan yahay in la nadiifiyo waqti ka waqti caws iyo cayayaanka kala duwan, taas oo geedaha yar yar yahay raaxo wanaagsan. Si joogto ah ula soco qoyaanka ciidda, tan iyo la'aanta qoyaan waa waxyeello leh waxayna keeni kartaa abuuritaanka si ay u qalalaan dhawr maalmood kadib markii la beero.
Daryeelidda geed jeex ah ayaa ku dhowaad isku midka ah daryeellka safka.
Badanaa cayayaanka sida nambarka dhirta ayaa isku dayaya geed. Wixii isaga ah, jilif khafiif ah ee warshadda ma aha caqabad dhab ah si aad u hesho cunto. Haddii aphids ay yar yihiin, ka dibna waxaa loo qaadi karaa gacanta, ka dibna la burburiyey. Haddii aphids ay ku filnayn ballaaran, ka dibna daawee meeshii cayayaanka ay ku ururaan wax kasta oo cayilan.
Kala duwanaanshaha Xasuusta ee Zhegalov dhif ayaa saameeya cudurada phyto. Si kastaba ha ahaatee, si loo ilaaliyo loona daweeyo warshad, waxaa lagama maarmaan ah in la ogaado calaamadaha ugu muhiimsan ee cudurada iyo waxyeeladooda waxyeelada leh.
Inta badan dhirta ayaa saameeya kala duwan noocyada caleenta caleen. Isku dar ah Bordeaux waa ku haboon tahay inuu la dagaallamo cudurkan (loogu diyaargaroobo, 300 g oo ah naxaas sulfate iyo 400 g oo lime ah lagu qasi karaa 10 litir oo biyo ah). Daawee caleemaha khudradda leh diyaarintaan iyo cudurka ayaa dhawaan soo kabanaya.
Cayayaanka cayayaanka ayaa loo aqoonsan karaa sida soo socota:
nuugista iyo weevil. Si loola dagaallamo, qaado 300 g oo ah boogaha tubaakada, ku shub 10 litir oo biyo ah kuna bixi 3 maalmood. Ka dib markaad adkeyso xalka iyo ku buufin dhirta 2-3 jeer leh mudo ah 10 maalmood;
duurjoogta iyo caleemaha caleen. Si loola dagaallamo, daroogada "Lepidocide" ayaa ku haboon. Dilaan 50 millilitir oo ah daroogada 10 litir oo biyo ah kuna qaadaan 2-3 daweyn oo leh mudo ah 10-14 maalmood;
sawfly iyo aphid. Diyaarso decoction cufan, tan, qaado 2 kilo oo irbado ah, buuxi leh 8 litir oo biyo ah iyo ku adkeyso dhan dhan toddobaad. Kadib markaad adkeyneyso xalka ku soo noqnoqo oo ku mil biyo ku jira saamiga 1/10. Isticmaal 3-4 jeer leh mudo ah 7 maalmood;
shilinta In dagaalka ka dhanka ah shilinta ku habboon 1% xal of kooloollada colloidal. Si arrintan loo sameeyo, waa in la burburiyo xirmooyinka daroogada 5 litir oo biyo ah. Ku daawee dhirta ku salaysan isticmaalka 2 litir oo sapin ah iyo ilaa 10 litir qofkiiba.
Marka waraabiyo pears in Memory of Zhegalov, xasuusnoow in geed geed sayid qaangaar ah oo aan dalban in ay helaan qoyaanka. Inta lagu jiro xilli, pear waxay u baahan tahay laba illaa afar waraabiyo, laakiin xaalad ah in ciidda ay si ku filan u qoyan tahay.
Xilliga cimilada qalalan, waa lagama maarmaan in la bakeeyo pear ugu yaraan toddobaadkii hal mar, iyo sidoo kale ciidda pristvolnuyu si aad u ilaalinta fiican ee qoyaanka. Ka hor inta aanad sameynin mulching, si taxadar leh ciidda ciidda.
Isku day inaad fuliso jaridda dhirta sida ka dib si kasta oo loo waraabiyo si looga hortago abuurista qolof ah. Xayawaan noocan oo kale ah ayaa halis u ah in ay ka hortagtaa bixinta qadar ku filan oo ah qoyaan iyo ogsijiinka xididdada geedka.
Dhirta geedku waxay u baahan tahay daryeel, taas oo xaqiijin doonta helitaanka nolol wanaagsan iyo koboca firfircooni xitaa sanadka kowaad ee xilliga sii kordhaya.
Bacriminta dhogorta ah waa inay noqotaa hab joogto ah oo ay weheliso waraabinta iyo dabacsanaanta ciidda.
Bacriminta waxaa la bilaabi karaa sanadka labaad ee koritaanka geed. Guga iyo dayrta ayaa ugu fiican dalabka bacrimin ah, laakiin quudinta xilliyadeed ayaa la samayn karaa xilliga xagaaga.
Si aad u nuugista bacriminta, ka samee hareeraha pear. Dhererka xayiraadda noocan oo kale ah waxay si toos ah ugu tiirsan tahay qiyaasta bacriminta la isticmaalo. Marka, 1 kiiloomitir. m carrada celcelis ahaan waa in lagu xisaabiyaa 9 kg ee humus, 25 g chloride potassium iyo 15 g of HOL. Shuban Bacriminta macdanta isku dhafan ee dhulka ku xoqan ka dibna Bacriminta organic.
Waa muhiim! Dhammaan Bacriminta waxay u qaybsan yihiin macdanta iyo organic. Isku dhafka iyo u hoggaansamida soo noqoshada codsiyada ayaa fure u ah horumarka dhirta oo dhan. Marka la isticmaalo bacrimin macdan oo gaar ah waxaa jira halis ah acidification xad dhaaf ah ee ciidda. Bacriminta dabiiciga ah waxaa lagu dabaqaa hal mar 2-3kii sanoba mar, taas oo aan ku filnayn horumarinta gebi ahaanba geedka.
Bannaanka u khibrad badan ayaa ku talinaya in la iska ilaaliyo sardianka wareegga dhirta ee geedka.
Carrabku waa inuu ahaadaa mid nadiif ah oo mulched leh. Waa mulch oo si taxadar leh u ilaalisa xididdada dhirta laga bilaabo qalajinta, sidoo kale waxay ka hortagtaa muuqaalka haramaha kala duwan waxayna ku haysaa heer aan fiicnayn qoyaan.
Sidoo kale, mulch waa nooc "barkin", taas oo yareynaysa saamaynta kala duwanaanta heerkulka ee geedka.
Under xaaladaha dabiiciga ah, mulch noqdaan caleemo dhacday, laanta yar iyo harta dhirta dhintay. Si aad u fuliso isteroberi, waxaa jira 3 siyaabood oo waaweyn:
dabooli kara ciidda ku dhow dhow-foorjada leh filim madow ama qalab khaas ah;
Daadi carrada leh noocyo kala duwan oo ka mid ah walxaha dabiiciga ah sida peat, balka, iwm.
daboolo ciidda lakabka ah ee compost.
Xeerarka aasaasiga ah ee manjooyin
Geedo geedo ayaa la qabtaa sanadka labaad kadib markii la beero. Si habboon u sameeyaan manjooyin ayaa kuu oggolaanaya inaad sameysid taajaji si uu geedku u siin doono xoogiisa oo dhan si loo daaqo miraha, iyo maaha in la kordhiyo laamaha aan loo baahnayn.
Manjooyin jeex ah laguma talinayo hal maalin, maadaama ay tani kaliya kicin doonto koritaanka firfircoon ee caleemaha cusub. Natiijo ahaan, manjooyin, oo la sameeyo hal maalin, waxay u horseedi doontaa xaqiiqda ah in dhowr sano oo caleemaha ka sareeyaan taajka geed.
Nidaamka saxda ah ee lagu jaro pear-ka wuxuu ka kooban yahay saddex tallaabo:
qaabaynta qaabaynta, kuu oggolaanaysa inaad abuurto taajka saxda ah;
nadaafada - waxaa la sameeyaa ka hor inta aanay geedka bilaabmin xilli sii kordhaya oo ay ku jiraan ka saarista laamaha qalalan iyo saameynta leh;
taageeridda - manjooyin weyn, kaas oo laga fuliyay bilawga Maarso ilaa horraantii Abriil. Marka la gooyo qaybo ka mid ah laamaha waaweyn, si aanay u badnayn miraha.
Waa muhiim! Dhirta waa in la gooyaa isla markiiba ka dib marka la beerto, aqoonsashada laanta qalfoofka, iyo sameynta taajkii mustaqbalka sanado badan. Habkani wuxuu si weyn u fududeynayaa daryeelkaaga dambe ee pear.
Shuruudaha Bisaylkiisa iyo kaydinta dalagga
Kala duwan ee Xusuusta ee Zhegalov waa dayrta goor dambe, muddada uu bislaad buuxda bilaabmaa tobanka sano ee saddexaad ee September. Maqsinnada isdabajooga ee xusuusta ah ee Zhegalov qaadataa meesha daqiiqad ah Bisaylkiisa buuxa, tan iyo miro yar oo kaliya u dulqaadan nolosha shelf dheer.
Waa qalad in la soo gabagabeeyo in miraha khudradda ay u bislaadaan ka dib marka laga saaro geed.
Dhab ahaantii, tani maaha run, liddi ku ah - miro khudradda xayawaanka ah ayaa leh nolol shafo xaddidan.
Xirmooyinka qoryaha alwaaxa ayaa si fiican ugu habboon kaydinta miraha. Ku rid pears iyaga ku jira 2-3 layers iyo iyaga kula saydhaa leh chips alwaax ganaax. Warqadda waxaa loo isticmaali karaa sida wax lagu xiro. Soo bixitaanka pear ee xasuusta Jegalladu waa qiyaastii 40 kiiloogaraam geedkii weynaa.
Kala duwanaanshaha Xasuusta ee Zhegalov waxay noqon doontaa geedka dhabta ah ee lagama maarmaanka u ah dadka deggan goobaha qaboobaha qabow, iyo sidoo kale kuwa raadinaya geed geedo u adkaysta leh oo leh dhalid sare. Thanks to ilaalinta ugu wanaagsan ee midhaha, waxaad si fudud u raaxaysan kartaa iyaga dhexe ee xilliga qaboobaha, marka kale kuwa kale waxay ku riyoon karaan ku saabsan.